इन्डियन आर्मी राहुल जस्लाई अन्तिम पटक फोनमा हाँसो गर्दै हिडेकी श्रीमती, काठमाडौं होटलमा अर्कै युवा संग यस्तो अबस्थामा भेटियो (भिडियो सहित) – Wow Sansar
इन्डियन आर्मी राहुल जस्लाई अन्तिम पटक फोनमा हाँसो गर्दै हिडेकी श्रीमती, काठमाडौं होटलमा अर्कै युवा संग यस्तो अबस्थामा भेटियो (भिडियो सहित)
February 2, 2021 178
काठमाडौ – तनहुका राहुल गुरुगं इन्डियन लाहुरेको श्रीमती आफ्नो सानी छोरीलाई विद्यालय छोड्न भन्दै हिडेकी थिइन् । उनी त्यस पछि घर फर्किइनन् । उनी उतैवाट हराइन् । तर अहिले केही समय पछि उनको श्रीमती स्मीता जनकपुरको नारायण यादवसंग काठमाडौको गौशाला स्थित एक होटलमा करिब एक महिना देखि बस्दै आएको पत्ता लागेको छ ।
Prevसल्यानमा अनौ’ठो ! श्रीमती साटासाट गर्न लागेपछि भयो यस्तो नसोचेको घ’टना (भिडियो हेर्नुस्)
Nextइलाममा खोला मा डुबेको भाइ लाइ बचाउन जादा
नेपालकै यस्तो ठाउँ जहाँ जे माग्यो त्यहि पुग्छ। के तपाइलाई यो बारेमा जानकारी थियो ? भिडियो सहित हेर्नुहोस